Nafaqada Iyo Caafimaadka Mooska!.
Author Topic: Nafaqada Iyo Caafimaadka Mooska!. (Read 57340 times)
« on: July 02, 2016, 02:59:31 PM »
Waxaan rabay inaad ii sharaxdo sababta mooska ay u cunaan ciyaaryahanada tenis ka ciyaaro waqtiga yar ay fadhiyaan iyo kuwa kubada cagta ciyaaro waqtiga 30 daqiiqo ee dheeriga ah ee lagu daro ciyaarta maxayna tahay sababta ay u isticmaali wayen qudaarta kle iyo wax yabaha u dheeryahay mooska qudaarta kale ee u isticmaalan marwalba
Re: Su'aal: Maxaa mooska loo cunaa?
« Reply #1 on: August 01, 2016, 05:45:27 PM »
Intaas oo la isku daray, mooska waa faakihada ugu fiican ee la cuno markaa howl culus qabatid sida ciyaaraha banooniga, tennis-ka iyo wixii la mid ah.
Faa'idooyinka kale ee Moosku leeyahay:
Caafimaadka Qaraha: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5841.0
Caafimaadka Babayga: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=6819.0